umbuzo B773ER Iingxaki
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #294 by Dariussssss
Kulungile, i kuba B773ER Philippines ezintsha apha, kwaye kukho ingxaki hydraulics. Enye yezona ndlela, kubonakala ezingenanto, yaye nokuba yintoni na endiya kuyenza, kaloku ihlala injalo. Ngenxa yoko, mna ludla nje yitshintshe waziqhekeza emhlabeni. Yonke oziqondayo Kulungile, ibhabha intle.
Ngomhla eliphezulu ECAM screen, kukho uluhlu iimpazamo kunye hydraulics. Bonke bephela unento yokwenza hydraulics inkqubo C, yaye ECAM esezantsi, oko omnye zililize.
Kufuneka kwakhona umqulu B772 elayishelwe ezantsi esuka apha, kunye VC mnye, kodwa ngaphandle iimpazamo.
Ngoko ke, nayiphi na indlela ukulungisa oku?
iinyanga 1 kunyaka 11 eyadlulayo #354 by Gh0stRider203
Emlilweni guys yesondlo, uze ufumane yalila entsha?
Zonke bendiqhula bucala ... Ngelishwa andinayo le ntaka, ngoko ke akukho nto ingako ndinokuyenza.
Ngaba wajonga zonke iiphaneli-ndenzile?
Ixesha ukwenza page: 0.339 imizuzwana